Ikhaya » izithuba » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iihotele eziPhambili zehlabathi zibiza uMongameli omtsha kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba
Iindaba zeNdibano zeAndorra • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • omnye • Abantu benza iindaba • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Iihotele eziPhambili zehlabathi zibiza uMongameli omtsha kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba
The Ukukhokela kwiihotele zehlabathi, Ltd (LHW) ibhengeze namhlanje ukuba iKomiti Elawulayo, eneehotele ezisixhenxe ze-LHW, ichonge uShannon Knapp njengo-Mongameli olandelayo kunye neGosa eliyiNtloko, elisebenza ngokukhawuleza. UKnapp, othathe uxanduva lobunkokeli kule nkampani ngo-Epreli njenge-CEO yexeshana, ngaphambili ebesebenza njengeSekela Mongameli eliPhezulu le-LHW kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso ngaphezulu kweminyaka emihlanu.
"U-Shannon uyinkokeli eyomeleleyo, esebenzayo neqhutywa ziinqobo ezisemgangathweni ebeqhuba isicwangciso-qhinga kunye nezinto ezintsha kwinkampani ukusukela oko wajoyina i-2013," utshilo u-Andrea Kracht, uSihlalo, iKomidi eliLawulayo, iihotele eziPhambili zeHlabathi kunye nePropathi, Baur okanye iLac. “Njengokuba ebekwizikhundla eziphezulu kwi-LHW ngaphezulu kweminyaka emithandathu, uShannon uliqonda nzulu ishishini lethu. Unamava amaninzi kubume bendawo yokundwendwela ebanzi. IKomiti eLawulayo iqinisekile ukuba phantsi kolwalathiso lwayo, uLHW uzakuqhuba ekhokela ishishini elizimeleyo lokubuka iindwendwe. ”
“Ndihlonitshwe ngendlela engathethekiyo kwaye ndizithobile ngethuba lokukhokela eli ziko, elinamalungu,” utshilo uShannon Knapp, uMongameli kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba, iihotele eziPhambili zeHlabathi. “Yenziwe ziihotele, kwiminyaka engaphaya kwama-90 eyadlulayo, i-LHW iye yahlala izinikele ekuxhobiseni impumelelo yamalungu ayo ehotele azimeleyo kunye nokuqinisekisa ukuba eli candelo likhethekileyo lokubuka iindwendwe liyaqhubeka nokuchuma. Ndiyayithanda le mishini kwaye ndikhuthazekile ukuba ndisebenzisane neehotele ezingama-430 ezimangalisayo kwingqokelela yethu kunye nabasebenzi abangaqhelekanga be-LHW ukuqhubela phambili loo mishini. ”
Ukusukela ekuthatheni uxanduva lobunkokeli njenge-CEO yexeshana, uKnapp wakhokela inkampani ngotshintsho olunempumelelo lobunkokeli kwaye waqala ukukhawulezisa amandla enkampani phantse kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo zeshishini. Ngeli xesha, waye wajonga umbono weqhinga le-LHW kunye nesicwangciso seshishini kwikamva elitsha lenkampani.
Kwindima yakhe njengoSekela Mongameli oPhezulu kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso, uKnapp ukhokele uphawu lwentengiso kunye neendlela zokuthengisa eziqhutywa yidatha, eguqula amava abathengi, kunye nokukhawulezisa ukuthembeka kwegama kwinkampani. U-Knapp wayejongana namacandelo ahlukeneyo entengiso ye-LHW kwaye wayenoxanduva lokuphinda kuqale ngokutsha kunye no-2018 wokuphinda aqalise inkqubo yokunyaniseka kweehotele, i-Leaders Club, inkqubo eyamkelweyo yi-Condé Nast Traveler njenge “yokubonelela ngendawo yokuthenga boutique kwiihotele ezikumgangatho ophezulu kunye izibonelelo. ”
Ukongeza, wakha uhlalutyo lokuthengisa kunye nemibutho yabathengi yokuqhuba ukutshintsha kweparadigm ekusetyenzisweni kwedatha ukwazisa isicwangciso sentengiso, kukhokelela kukonyuka kokusebenza ngokuthengisa kunye nezigidi zeedola kwingeniso eyandayo.
I-Knapp ikwazisa ubutyebi bamava okuhamba kubunewunewu ukusuka kwiminyaka eli-15 e-American Express, apho wayenethuba lokusebenza kumacandelo ohambo kunye noLonwabo, elawula iinkqubo zokundwendwela, amaqabane kunye nezibonelelo zamalungu ePlatinam kunye neCenturion Card kunye ne-consortia yokuhamba ishishini.
Ukuthengisa okuqinileyo kukaShannon kunye namava abathengi kuya kwenza ukuba i-LHW iqhubele phambili ngamandla ayo okudibanisa abahambi abanomdla abalixabisayo ibali elingaqhelekanga elifanelekileyo lokuhamba kunye neehotele ezihlala ukuzenzela ubugcisa, utshilo uKracht. "Ukuchongwa kweShannon kuzakuveza umbono omtsha kwishishini lethu eliza kuchaza indima ye-LHW ekuxhobiseni impumelelo yamalungu ayo."